I-China i-500ml yokufuma kwesandla se-Sanitizer TECH-BIO mveliso kunye nabenzi | Zhongrong
Ngaphantsi kwefuthe le-covid-19, Isandla I-Sanitizer iba yimfuneko yokhathalelo lobuqu kubomi bethu bemihla ngemihla ngakumbi kwezinye iindawo zikawonke-wonke ezinje ngesikolo, isibhedlele, ivenkile enkulu, ihotele, njl. Ipakethe ye-500ml ilunge kakhulu kusetyenziso losapho kwaye inokuqhutywa malunga nesiqingatha senyanga. Njengoko sivelisa utywala obukrwada, amaxabiso ethu aya kukhuphisana nomgangatho ophezulu wezinto zokucoca izandla zethu. Ngapha koko, sidlule i-CE, i-FDA, kunye ne-ISO yokuqinisekisa. Sazisa uphawuI-TECH-BIO ukubenza njengophawu 1 lophawu lokususa iintsholongwane e-China njengoko sinobulunga obuphezulu botywala e-China. Siyinkokeli e-China kwitekhnoloji ye-ethanol. Sine-500,000 yendawo yokusebenzela yemitha kwiphondo laseHebei, China. Inkampani yethu yasekwa ngo-1999. Nangona kunjalo, sinokwamkela i-OEM kunye ne-ODM ngazo zonke iintlobo zokucoca ngesandla. Ukujonge phambili ekubeni liqabane lakho lehlabathi kwaye uzalisekise imeko yokuphumelela!
Umthamo womnatha: 500ml
Izinto eziluncedo: Utywala busekwe kwindawo ekhuselekileyo kwindalo esingqongileyo · I-Triclosan yasimahla · I-Moisturized
Izithako ezingasebenziyoAmanzi acociweyo, iCarbopol, Isopropyl Alcohol, Triethanolamine, Fragrance.
Zeziphi izinto "eziqhelekileyo" ezicocekileyo? Ngaba iya kubulala i-corona?
Enkosi ngombuzo omkhulu! Siyasiqonda ngokupheleleyo ukuba kutheni ubuza lo mbuzo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba i-FDA okwangoku ayizamkeli naziphi na iziyobisi, kubandakanya nezicoci zandla, ukunqanda okanye ukunyanga i-covid-19. Sithatha uxanduva lwethu lokuqinisekisa ukuba abathengi baya kumthombo ofanelekileyo wolu hlobo lolwazi, kwaye ke sikukhokele kwiiwebhusayithi ze-FDA okanye ze-CDC ukuze ufunde malunga nendima yabacoci ekuthinteleni ukusasazeka kwe-COVID.
Enkosi ngokufikelela malunga ne-TECH-BIO Moisture Hand Sanitizer! Zama ukucinezela phantsi kwimpompo ngentende yesandla sakho kwaye ujike kwikhawuntara yewotshi nemveliso ejongene nawe. Impompo kufuneka ivele.
Egqithileyo Isicoci ngesandla se-OEM
Okulandelayo: I-50ml yesandla se-Sanitizer Gel TECH-BIO